Nhau - Shure kwechiitiko: Ashine 's core makwikwi - revatengi timu
Shure kwechiitiko: Ashine 's core makwikwi - revatengi timu
Musi waZvita 22 wa2020, Ashine Vatengi Sevhisi Yechikwata-yekupedzisira pfupiso uye 2021 chirongwa chebasa chakatanga nenguva.
Denda rakapararira muna2020 raita kuti kambani yega yega isangane nematambudziko makukutu, uye kutopikisa simba rekambani, iro rinosanganisira kwete simba rakaomarara chete, asiwo simba rakapfava. Timu yebasa revatengi yaita basa rakawanda kune vatengi kuseri kwezviitiko, zvinosanganisira:
Mutengi akamboisa odha yekutenga zvigadzirwa kubva kumutengesi wepamba, asi haana kuzogamuchira izvo zvinhu mushure mekubhadhara. Kunyangwe kana ivo vakanyengedzwa uye vakangwarira kune vagadziri vepamba, vatengi vachiri nekutenda kusingagumi kuna Ashine uye vanotipa isu kuti tibatsire kutenga zvigadzirwa zvemumba.
02 Pasina kudzoka
Kana vatengi vari mukukurumidzira kuda kwechimwe chigadzirwa, kana mudziyo wekutakura uchishomeka uye nzvimbo isina kubhukirwa, Ashine vatengi haiverengi muripo, uye inoita zvese zvinogoneka kuti iwane kutumirwa kwevatengi uye kugadzirisa zvavanoda nekukurumidza; Kuchengeta kwechokwadi kune vatengi panguva yedenda, mahara Bvisai denda rekudzivirira zvinhu.
03 Mwoyo kumoyo
Inobatwa nedenda, huwandu hwekutakura zvinhu mugungwa hwakwira zvakanyanya. Zvichienderana nemutemo wekutarisa kubva pakuona kwevatengi, Ashine sevhisi yevatengi yaita basa rakawandisa zvakawandisa, vachienzanisa mutengo uye nenguva yezvakawanda zvekushandisa nezvimwe zvinhu zvakakosha, uye nekutsvaga nzira inoshanda uye inokurumidza kwazvo yevatengi kuchengetedza mitoro.
04 Dzidzisa kudzidzisa
Munguva yedenda, dhipatimendi rebasa revatengi rakaramba richikurudzira kudzidziswa kwekugadzirwa kwefekitori uye zvikwata zvekudzora zvemhando yepamusoro kuti zviwedzere kusimudzira ruzivo rwevashandi vese nekusimudzira kukwikwidza kwekambani.
Iyo ramangwana chirongwa chedhipatimendi rebasa revatengi chinogara chiri chekushandira vatengi zvakadzama, kubata zvese zvakadzama zvakanyanya, uye kushandisa zviito kugadzira irreplaceable pfungwa yekuvimbika kwevatengi uye kuvimba.
2020 yakagadzirirwa gore rinoshamisa. Zvese zvidiki asi zvikuru zvedu zviri kusangana nenhoroondo uye kupupura nhoroondo. Mune rino rakaoma uye rakakosha gore, mushandi wega wega weAshine anga achinamatira kumweya wekurima zvakanyanya zvigadzirwa, kuenderera kunatsiridza kwehunhu hwechigadzirwa uye kwakadzika-vatengi. Isuwo takaremekedzwa kwazvo kushanda pamwe chete nevatengi vese kushandisa ino yakakosha uye gore rinoreva. Zvino mhepo yekumabvazuva painonyungudika uye zvipembenene zvinoruma zvava kutanga kudedera, tinotenda kuti ramangwana raAshine richaenderera nekuteerera kune kwakakwirira basa rekuita uye hunyanzvi hwaAshine, uye kufambira mberi, rega Ashine ave chiratidzo chemhando yepamusoro, chinja zvachose mufananidzo wepasi-pasi wakagadzirwa-mu-China, uye uve mutengesi anoremekedzwa pasi rese wekukuya pasi uye kupora maturusi edhaimondi!
Yakavambwa muna1993, Ashine Diamond maturusi inyanzvi yekugadzira zvishandiso zvemadhaimani, iri muFujian, China, neketani yakakwana uye izere yeindasitiri yemidziyo yedhaimani, pamwe neyakareruka nzira yekuendesa. ASHINE anogara achizvipira kugadzira maturusi edhaimani ayo asiri eushamwari chete kune zvakatipoteredza asi zvakare ane hushamwari kune vashandisi.
Diamond Kwayedza Bhutsu, PCD Kukuya Shangu, Concrete makorari Mapedhi, Concrete vachikuya Shoes, Trapezoids Daimondi Kukuya Shangu, Simbi Yakasungwa Daimondi Kukuya Mavhiri,